“South Sudan Waa Cadowga Sudan”Madaxweynaha Dalweynaha Sudan Cumar Al-Bashir | Berberatoday.com
“South Sudan Waa Cadowga Sudan”Madaxweynaha Dalweynaha Sudan Cumar Al-Bashir
Khartoum(Berberatoday.com)-Madaxweynaha Sudan Omar al-Bashir ayaa ku tilmaamay dowladda dariska ee South Sudan inay yihiin ‘cadowga’ dalkiisa, sida ay baahisay warbaahinta maxaliga ah Radio Tamazuj.
Dawlada Sudan ayaa bishii September ku hanjabay in ay xirto xadka ay la wadaagto South Sudan haddii maamulka Koonfurta ay kala diri waayaan kooxaha ka soo horjeeda maamulka dalka Sudan. Bashir oo la hadlayay saraakiisha sirdoonka Sudan todobaadkii la soo dhaafay.
Sida laga soo xigtay saraakiisha maamulka , ayaa sheegay in South Sudan ay weli beegsanayaan dalkiisa iyo in aysan dooneynin in ay hirgeliyaan Heshiisyada 2012 ee iskaashiga wadajirka ay saxiixdeen labada dal.
Bashir ayaa ku dheeraaday isaga oo carabka ku adkeeyay in heshiis kasta ee nabada ah oo lala saxiixday dhaqdhaqaaqa Sudan People’s Liberation Movement-North (SPLM-North) aysan ku jirin is-dhexgalka dagaalyahanadooda ee Ciidamada Qalabka Sida ee dalka Sudan (SAF), isagoo mucaaradka SPLA-ee waqooyiga sheegay inay weli qayb ka mid ah yihiin ciidanka South Sudan .
“Kuwa ku jira Blue Nile weli waa qayb ka mid ah SPLA, iyo kuwa weli ku sugan South Kordofan ayaa weli ku jira qayb ka mid ah SPLA kuwaas oo ah ciidanka South Sudan ayuu yiri bashir. “Waxay ahayd in la siiyo xuquuqda ay leeyihiin ka dibna ay hubka dhiibaan si ay noogu yimidaan , laakiin ma ay yeelin sidaas.
Waxay rabaan in aan la xaajoono iyaga , laakiin ma dhaceyso wax is-dhexgal ah ee mucaaradka, “ayuu sheegay.
Kooxaha ilaaladii siyaasadeed ayaa u arka hadalka madaxweynaha calaamad ka mid ah xiisadaha kii kordhay ee gaabis ka mid ah fulinta heshiisyada wadajirka ah ee u dhexeeya labada dal .